सरकार बढायो पेट्रोल-डिजेलको मूल्य
काठमाडौं । सरकारले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । योसँग पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी साविकको बिक्री मूल्यमा पेट्रोल र डिजेल/मटितेल प्रतिलिटर रु. ३ ले वृद्धि भएको नेपाल आयल निगमले जनाएक्ो छ । अब पेट्रोल १४२ र मटितेल १२५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि […]
काभ्रेको बनेपा सहित एनआइसी एशिया बैंकका ११ शाखा तथा बिस्तारित काउण्टटरहरु बन्द
बढ्दो को रो ना भाइरसको सं क्र म णलाई मध्यनजर गर्दै एनआइसी एशिया बैंकका ११ शाखा तथा बिस्तारित काउण्टटरहरु बन्द भएका छन् । बैंकले एक सूचना जारी गर्दै ४ वटा बिस्तारित काउण्टर र ७ वटा शाखा कार्यालय बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ । साथै स्थानिय निकायको निर्देशन अनुसार हेरफेर समेत हुन सक्ने बैंकले जनाएको […]
काठमाडौँ, कार्तिक १२ : सरकारले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ । शुक्रबार रातिबाट लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोल, डिजेल, मटितेल, हवाई इन्धनको मूलय बढाएको छ । निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ ले तोकेअनुसार पेट्रोलको साबिकको विक्रि मूल्यमा रुपैयाँले वृद्धि गरी १३३ रुपैयाँ कायम गरेको छ । डिजेल/मट्टतिेलको मूल्य […]
काभ्रे : काभ्रे जिल्लाको चौंरीदेउराली गाउँपालिकाका बृद्ध–बृद्धा र शारीरिक अ शक्त भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमै पुगेर वितरण गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ गौतमको विशेष पहलमा उनीहरूलाई बुधवारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमा वितरण गर्न थालनी भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/ ०७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कसम्म पुगी लिन नसक्ने लाभग्राहीहरूलाई गाउँपालिका, वडा […]
काभ्रे : समय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आठौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको बनेपामा कार्यालय रहेको साकोसको वार्षिक साधारणसभा असोज १० गतेबाट सुरु भएको थियो । वार्षिक साधारणसभा ३ दिन पछि आज संस्थाकै कार्यालयमा सम्पन्न भएको हो । संस्थाका अध्यक्ष भिम बास्कोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सेयर सदस्य लगायत ६०७ जनाको […]
काठमाडौं : मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि यही असोज २० गतेदेखि साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीको शेयर बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरमा कुल ९० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। कम्पनीले यसअघि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्काशन गरेको पहिलो चरणको शेयर […]
काठमाडौं,असार ३;भोलि (असोज ४) गतेदेखि दसैं/तिहारका लागि बजारमा नयाँ नोट आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ४ गतेदेखि नयाँ नोट साट्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सर्वसाधारणले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट नयाँ नोट साट्न पाउने छन् । राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेशस्थित कार्यालयबाट नयाँ […]
युवा साकोसको दोस्रो सेवाकेन्द्र पाँचखालमा
युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को पाँचखाल सेवाकेन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ । पाँचखाल नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष उदयराम कायस्थको अध्यक्षता रहेको थियो । सो सेवाकेन्द्रको कार्यालय समाजकल्याण चोक नबिल बैंक रहेको घरको दोस्रो तल्लामा रहेको छ । कार्यक्रममा उपप्रमुख दनुवारले सहकारी संस्थाले ऋण […]
काभ्रे : नमोबुद्ध नगरपालिकाको दसौं नगरसभा (बजेट अधिवेशन) आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै आज सोमबार सम्पन्न भएको छ । नगरसभाले नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाद्वारा असार १० गते बसेको दशौं सभाको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । नगर प्रमुख तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाले असार […]
काभ्रे : काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गराको छ । आज बसेको नवौँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गराको छ हो । नगरसभाले ९९ करोड, ५९ लाख, २ हजार, १४२ रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन, खेलकुद […]